Hay’ada Hormuud Salaam Foundation ayaa 10 sariiriiraha dhalada ah ee la galiyo caruurta aan bila dhameysanin ugu deeqday isbitaalka Banaadir. | dayniiile.com
Home WARKII Hay’ada Hormuud Salaam Foundation ayaa 10 sariiriiraha dhalada ah ee la galiyo...
Hay’ada Hormuud Salaam Foundation ayaa 10 sariiriiraha dhalada ah ee la galiyo caruurta aan bila dhameysanin ugu deeqday isbitaalka Banaadir.
Munaasabada hay’adu ku wareejinaysay sariiraha ayaa waxaa goob joog ka ahaa masuiliyiin katirsan isbitaalla Banaadir, madax ka socotay wasaarada caafimaadka xukuumada Federaalka Soomaaliya iyo madaxda hay’ada Hormuud Salaam Foundation.
Gudoomiyaha Hay’ada Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan. ayaa sheegay in qalabkan ka kooban sariiraha dhalada ah ay keeneen isbitaalka iyaga oo ka jawaabaya codsi horay uga yimid maamulka isbitaalka isaga oo sheegay in qalabkan ay kasoo iibiyeen dalka Dibadiisa.
Agaasimaha isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee banaadir Fartuun shariif oo munaasabad ka hadashay ayaa sheegtay in Qalabka hay’ada Hormuud Salaam Foundeeshan ay ugu deeqday isbitaalka wax weyn ay ka tari doonto baahidii ay u qabeen iyadoo uga mahad celisay Maamulka iyo shaqaalaha Hey’adda Hormuud Salaam Foundation.
Drs Ubah Farah Ahmed Agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasarada cafimadka ayaa dhankeeda ka mahad celiyay qalabkaan ay hey’ada Hormuud Salaam Foundation keentay isbitaalka banaadir iyadoo sheegtay in ay tahay arin ku dayasho mudan.
Agasimaha maamulka iyo maaliyada wasarada cafimadka Xukuumada Federaalka Soomaaliya Abdulahi Salaad Xusen ayaa ku amaanay kaalinta Hay’ada Hormuud Salaam Foundation ay ka qaadaneyso Hormarinta Isbitaalka.
Hay’ada Hormuud Salaam Foundation ayaa dhawaan lagu wadaa in isbitaalka banaadir ay geeyso matoor dab dhaliye ah kaasi oo hay’adu ay ka soo iibisay wadanka Dibadiisa, waxaana hay’ada horay warshad dhalisa Oksajiinta ay geesay isbitaalka xili dalka uu si daran kaga jiray Cudurka Covid-19 iyada oo qeybo ka mid ah isbitaalka dib u dayactir.
Next articleRa’isul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta Rooble oo soo dhaweeyay magacaabista Ra’isul Wasaaraha cusub
Koonfur Galbeed oo sheegtay in ay qabatay xubno Shabaab ka tirsan
War deg deg ah: Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo oo goor...